Maxay ahayd waxyaabihii uu la yaabay markii uu qolka labiska ee Blues kusoo laabtay halyeygii hore ee Chelsea Didier Drogba oo shalay ciyaarta daawade ka ahaa? | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » Maxay ahayd waxyaabihii uu la yaabay markii uu qolka labiska ee Blues kusoo laabtay halyeygii hore ee Chelsea Didier Drogba oo shalay ciyaarta daawade ka ahaa?
Maxay ahayd waxyaabihii uu la yaabay markii uu qolka labiska ee Blues kusoo laabtay halyeygii hore ee Chelsea Didier Drogba oo shalay ciyaarta daawade ka ahaa?	Weeraryahankii hore ee Chelsea Didier Drogba ayaa dib ugu soo laabtay, garoonkii uu libaaxa ka ahaa ee Stamford Bridge, sabtidii shalay, isagoona u yimid inuu daawado kulan ciyaareedka xafiiltanka ah ee dhexmaray Chelsea iyo Arsenal, markaasoo kooxdiisii hore ee Blues guul raaxa leh oo 3-1 ah kaga adkaadeen Arsenal.
Halyeeygii qaranka Ivory Coast, ayaa u dhaliyay in kabadan 100 gool oo horyaalka ah Blues, sagaal xilli ciyaareed oo uu joogay galbeedka London, waxaa uuna sheegay in macalin Chelsea Antonio Conte, uu mudan yahay in loola dhaqmo sida Mastar oo kale, isagoona sidoo kale sheegay in Blues ay ugu cad-cadahay hanashada tartanka horyaalka.
Kadib guushii raaxada laheed, Drogba ayaa waxaa dib loogu soo dhaweeyay qolka labiska Chelsea, markaas uu ku cararay daafaca Blues Kurt Zouma.
Daafacan 22-sano jirka ah ayaa bedel kusoo galay qeybtii labaad ee kulankii Gunners, Zouma iyo Drogba ayaana ahaa kuwa Murqo isugu faana.
Weeraryahanka halyeeyga ah ayaa markii danbe soo dhigay Instagram-ka, isagoona yiri: “Haye barasho wanaagsan, waxaad tahay ciyaaryahanka kaliya ee aan nolosheyda ku arkay 12 Pack, Lix caloosha ah iyo lix gadaal ama duudka ah”.
Drogba ayaana ka mid ah xiddigaha Horyaalka Egland kaga dhaliyay goolasha ugu badan kooxda Arsenal, waxaana ku wehlinayay daawashadii ciyaartii xalay ciyaartoy horay usoo maray Chelsea sida Mechael Essian iyo kuwa kale.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/maxay-ahayd-waxyaabihii-uu-la-yaabay-markii-uu-qolka-labiska-ee-blues-kusoo-laabtay-halyeygii-hore-ee-chelsea-didier-drogba-oo-shalay-ciyaarta-daawade-ka-ahaa/">Maxay ahayd waxyaabihii uu la yaabay markii uu qolka labiska ee Blues kusoo laabtay halyeygii hore ee Chelsea Didier Drogba oo shalay ciyaarta daawade ka ahaa?</a>